Sina Zavamaniry legioma mihetsiketsika miteraka fanamboarana sy orinasa | Lonovae
Ireo vata famindrana plastika Lonovae dia natao ho maivana, azo aforitra, maharitra, azo ampiasaina indray ary ara-toekarena, manome vahaolana tonga lafatra amin'ny fonosana hitehirizana, hiarovana ary hitaterana entana na fitaovana tsy misy rano tsy misy rano (marefo, marefo, tsy misy rano, toy ny elektronika, kosmetika, voankazo ary zava-pisotro. ) ho an'ireo mpaninjara, mpivarotra ary mpampiasa farany. Mora ny mitantana, mitsitsy toerana.
Anaran'ny vokatra Voankazo azo aforitra legioma-LN01
lafiny 600 * 400 * 180mm
Anaran'ny vokatra Voankazo azo aforitra legioma-LN02
lafiny 600 * 400 * 255mm
Fanoherana avo sy ambany
100% fitaovana PP vaovao
Soloy tsikelikely ny fonosana nentim-paharazana
Sarobidy amin'ny tarehy sy ny fifanoratana anaty
Ny famonosana vokatra vaovao dia misy fetrany betsaka ny tsy fitoniana tsy mahomby sy ny fiarovana ny enta-mavesatra izay mitarika fahasimban'ny vokatra. Amin'ny tranga sasany, ny fonosana vita amin'ny vokatra nentim-paharazana dia mety hitarika amin'ny tahan'ny fahasimbana hatramin'ny 4% raha toa kosa ny vaton'i Lonovae azo aforitra mampihena io taha io hatramin'ny 0,1%. Fanatsarana lehibe ny kalitaon'ny vokatra sy ny tombom-barotra amin'ny mpivarotra.
Fanoherana avo ny hafanana 65 ° C, tsy misy fiovana na fiempo.
Mifanohitra amin'ny maripana ambany -18 ° C, tsy simba ary tsy marefo.
Recycled ao amin'ny trano fitehirizana vata fampangatsiahana na rojo mangatsiaka, dia tsy mora amin'ny fahamendrehana sy ny fahanterana. Raha maloto izany dia azonao atao ny mampiasa ny «piste-spray» raha te hanana endrika vaovao ianao. Raha ampitahaina amin'ny baoritra, ny vidin'ny fampiasana maharitra dia ambany kokoa, ary ny tahan'ny harafesina dia azo ahena tsara, ary ny fotoana fampiasana dia lava kokoa noho ny 3 ka hatramin'ny 5 taona.
Ny boaty aforitra dia manana tombony amin'ny lanja maivana, dian-tongotra kely ary fivoriambe mety. Nampiasaina be dia be izy ireo tamin'ny rafitra fizarana loop-loop toy ny fivarotana lehibe fivarotana lehibe, fivarotana enta-mavesatra ary foibe fizarana lehibe.
Aorian'ny aforitra dia mihena mihoatra ny 75% ny volavola, ary manana tombony ny lanjan-jiro, kely ny habaka ary mifangaro mety. Efa tao anaty gadra lehibe no nampiasana azy io tamin'ny rafitra fizarana fantsona mihidy toy ny fivarotana lehibe, fivarotana enta-mavesatra ary foibe fizarana lehibe.
Vahaolana fonosana vaovao
Izahay Lonovae dia manana fivoaran'ny tena, famokarana bobongolo ary famokarana famolahana tsindrona.
Teo aloha: Lamba famaohana fanadiovan-dakozia azo ampiasaina
Manaraka: Vata mihorona